Icala le-Wholesale Phone lishicilela UK China Manufacturer
Incazelo:I-Printer Case Case Printer,I-R1390 yefoni yephrinta yephrinta i-Amazon,I-Adapter ye-Case ye-Case ye-R1390 yefoni
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Ifoni yephrinta yefoni > Icala le-Wholesale Phone lishicilela UK
Icala le-Wholesale Phone lishicilela UK
Nge-Shenzhen RFC Printer Case Printer ungakwazi ukufaka umbala futhi uhambise izindawo zakho zasekhaya. Ungaphrinta kwimeko yefoni / igobolondo / iseli, ukukhiqiza ngokuqondile efonini yocingo noma yimaphi imibala yezithombe ozithandayo, ukushintsha nokunikeza izikhala zakho eziyingqayizivele. Ukusebenzisa kwethu inkinobho yemvelo ngomshini, ngakho-ke ubeka ingqondo yakho ekuphumuleni.
I-Low Price Wholesale Phone Case Ukunyathelisa i-UK uhlobo lwemishini ye-"type non-contact" ye-jet uhlobo lwedijithali, uhlelo lwe- Wood Phone Case Printer olunzulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
1. Ukunambitheka komuntu ngamunye komuntu siqu.I-R1390 ye-Phone Case Printer i-Amazon , uma nje uthanda, yenza ubugebengu befoni / igobolondo / iselula, ngokucacile nobuciko, bukhulise ibanga lakho.
4. I- Adapter ye-R1390 yefayili yefoni yanda kakhulu ethandwa emhlabeni jikelele.
Izici eziwusizo ze- Our Phone Phone Case Ukunyathelisa UK RF-A3UV:
2. Ifoni Yesikhwama Sefoni Yezinkuni ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. R1390 Hambayo Case Printer Amazon I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
I-Printer Case Case Printer I-R1390 yefoni yephrinta yephrinta i-Amazon I-Adapter ye-Case ye-Case ye-R1390 yefoni I-Printer Cake Printer I-Printer Edible Image Printer I-Printer Color Printer I-Phone Phone Case Printer 6 I-Printer ye-Canvas Bag Printer